आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल असोज २१ गते। आइतबार। – AstroSimara.Com
By Astro Sudeep Dhakal	 On Oct 6, 2018
इश्वी सन् २०१८ अक्टोबर ७ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। दक्षिणायन। शरद ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ ञलगा। आश्विन कृष्णपक्ष। तिथि– त्रयोदशी, १२:४६ बजेउप्रान्त चतुर्दशी। नक्षत्र– पूर्वफाल्गुनी, १५:१० बजेउप्रान्त उत्तरफाल्गुनी। योग– शुक्ल, २१:३० बजेउप्रान्त ब्रह्म। करण– वणिज, १२:४६ बजेदेखि भद्रा, २३:४६ बजेउप्रान्त शकुनि। आनन्दादिमा छत्र योग। चन्द्रराशि– सिंह, २०:५१ बजेउप्रान्त कन्या। काठमाडौंमा सूर्योदय– ६:०० बजे, सूर्यास्त– १७:४२ बजे र दिनमान २९ घडी १५ पला। सर्वार्थसिद्धि योग २३:४६ बजे प्रारम्भ। शस्त्र-अस्त्र आदिबाट मरेकाको चतुर्दशी श्राद्ध। नलाश्वनेचह्रे पूजा। जुम्ला खलङ्गामा चन्दननाथको लिङ्गो उत्थान।
स्वास्थ्यलाई निश्चित नै हेरविचारको आवश्यकता पर्छ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। आफ्ना बच्चाको एउटा पुरस्कार समारोहमा निमन्त्रणा गरिएकोमा तपाईं आनन्दित हुनुहुनेछ। तपाईंले आशा गरे झैं उसले उन्नति गरेकोमा तपाईंको सपना साँचो भएको पाउनु हुनेछ। यात्राले मायाप्रिती फैलाउनेछ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीको मायाम जीवनका सबै कठिनाइहरू बिर्सिनु हुनेछ।
स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याहरूले असुविधा गराउन सक्छन्। शंकास्पद वित्तीय सम्झौतामा बाँधिनुबाट सावधान रहनुहोस्। परिवारमा स्वास्थ्यको समस्या भएका कारणले पहिले बनाएका यात्रा कार्यक्रमहरू सर्न सक्छन्। तपाईंले एउटा मायालु र समझदार मित्र भेट्नु हुनेछ। यात्रा लाभदायी तर महँगो हुनेछ। तपाईंको जीवनसाथी कहिल्यै आजभन्दा रमाइलो थिएनन्।
डरले तपाईंको आनन्द बिगार्न् सक्छ। तपाईंले यसलाई आफ्नै विचार र कल्पनाको उत्पादन हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। यसले स्वेच्छाको हत्या गर्नेछ – बाँच्नुको आनन्दलाई मार्दछ र तपाईंको दक्षतामा बाधा दिनेछ – यसै कारण तपाईंलाई यसले कायर बनाउनु अघि यसको बीउ नै मारिदिनुहोस्। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। आफ्नो हँसिलो प्रकृतिले सामाजिक जमघटमा तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउनेछ। तपाईंको मुस्कान आफ्नो प्रियको दुख निवारणको सबैभन्दा राम्रो औषघि हो। तपाईंलाई आफ्नो जीवनमा रोचक कुरा होस भनेर लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ भने – तपाईंले केही राहत पाउने पक्का छ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको लागि साँच्चै विशेष कुरा गर्नेछन्।
आध्यात्मिक व्यक्तिले आशिष दिन्छ र मनमा शान्ति ल्याउँछ। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। तपाईंले धेरै नभेट्ने मान्छेसँग कुराकानी गर्न राम्रो दिन। तपाईंको प्रेम सम्बन्ध जादुले भरिएको हुनेछ; मात्रै यसलाई महसुस गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। तपाईंलाई आज लामो समय पछि आफ्नो जोडीबाट साँच्चै मायाले भरिएको र न्यानो अंगालो प्राप्त हुनेछ।
बाहिरी गतिविधिहरूले तपाईंलाई लाभ दिनेछन्। गढ जीवन शैली मन पराउनु र सधैं सुरक्षा बारे सोचले तपाईंको शारीरिक साथै मानसिक उन्नतिमा हानि पुर्याउनेछ। यसले तपाईंलाई एउटा त्रसित व्यक्ति बनाउनेछ। अरूले भनेको मानेर लगानी गरेमा आज आर्थिक घाटाको सम्भावना देखिन्छ। बच्चाहरुले हेरचाहको माग गर्छन तर आनन्द ल्याउँछन्। तपाईंले प्रेम सम्बन्धमा गलत बुझ्ने सम्भावना छ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। केही विशेष आश्चर्य गरेर तपाईंको जीवनसाथीले तपाईंलाई नराम्रो मुडबाट छुटकारा दिलाउनेछ।
योग र ध्यान तपाईंलाई तन्दुरूस्त र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन मद्दत गर्नेछ। ब्याङ्कका कामहरूमा धेरै ध्यान दिनु आवश्यक छ। आफ्नो राय छोराछोरीलाई जबरजस्ती थोप्नाले तिनीहरूलाई परेशान गराउन सक्छ। तिनीहरूलाई बुझाउनु राम्रो छ, जसले गर्दा तिनीहरूले यसलाई स्वीकार गर्न सकून्। तपाईंले आज आफ्नो प्यारो प्रेम जीवनमा स्वादिष्ट मसलाको स्वाद पाउनु हुनेछ। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। तपाईंको वैवाहिक जीवनले यस दिन एक रमाइलो चरण देख्नेछ।
तपाईं आजको भावुक मुडबाट बाहिर निस्किन चाहनुहुन्छ भने विगतमा जानु आवश्यक छ। लामो अवधिको दृष्टिले लगानी गरिनु आवश्यक छ। टाढाका आफन्तले आज तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछन्। प्रेमको शक्तिले तपाईंलाई प्रेम गर्ने कारण प्रदान गर्दछ। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने – त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको बारेमा सबै राम्रो कुरा गरेर प्रशंसा गर्नेछिन् र तपाईंको लागि समर्पण गर्नेछिन।
हँसिलो हुनुहोस् किनकि यो तपाईंका सबै समस्याहरूको लागि उत्तमा विष मार्ने औषघि हो। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ – जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। तपाईंले चाहनुभएको सबै ध्यान प्राप्त गर्नुहुने आज राम्रो दिन छ – तपाईंले धेरै कुराहरू लहरै पाउनुहुनेछ र तपाईंलाई के चाहिं लिनु हो भन्ने निर्णय लिन समस्या पर्नेछ। तपाईंको प्रियले प्रतिबद्धता खोज्नेछन्। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। कुनै मामलालाई लिएर तपाईंले आफ्नो जोडीलाई नराम्रो गर्नाले झगडा हुन सक्छ।
मित्रहरूले सहयोग गर्नेछन् र तपाईंलाई खुसी राख्नेछन्। तपाईंले जानेका मानिसहरूको माध्यमबाट आयका नयाँ स्रोतहरू उत्पन्न हुनेछन्। परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ। तेस्रो व्यक्तिको हस्तक्षेपले तपाईं र तपाईंको प्रिय बीच तनाउ सिर्जना गर्नेछ। पुरानो कुनै मित्रले तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछ र यस दिनलाई अविस्मरणीय दिन बनाउने सम्भावना छ। आज तपाईंको जोडी आफ्नो कामसँग यति आशक्त हुन सक्छ जसले गर्दा तपाईंले उदास महसुस गर्नु हुनेछ।
आज तपाईंको भरोसा बढ्नेछ र प्रगति निश्चित छ। धेरै स्रोतबाट मौद्रिक लाभ हुनेछ। पुराना आफन्तहरूले अव्यावहारिक मागहरू गर्ने सम्भावना छ। तपाईंले प्रेममा हरेक दिन पर्ने आफ्नो प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। गलतफहमीको नराम्रो चरण पछि, साँझसम्ममा तपाईंको जोडीको प्रेम पाउनुहुनेछ।
एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। हल नभएका मुद्दाहरू कठिन बन्नेछन् र खर्चले तपाईंको मन मन ढाक्नेछ। घरमा छोराछोरीले अनुपात बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न गरेर तपाईंलाई समस्यामा पार्नेछन् – कुनै पनि कदम चाल्नु अघि तथ्य प्रमाणित गर्नुहोस्। प्रेम परमेश्वरको उपासना गरेजस्तै हो; यो धेरै धार्मिक हो साथै आध्यात्मिक पनि हो। तपाईंलाई यो आज थाहा हुनेछ। आफ्नो ठूलो भरोसाको फाइदा लिएर बाहिर जानुहोस् र केही नयाँ सम्पर्क र मित्र बनाउनुहोस्। तपाईंको वैवाहिक जीवनलाई लिएर कुराहरू आश्चर्यजनक तरीकाले तपाईंको पक्षमा आउन सक्छन्।
तपाईंको स्पष्ट र निडर हेराइले तपाईंका मित्रलाई व्यर्थ चोट लाग्न सक्छ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। तपाईंको ज्ञानको तिर्खाले नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। रोमान्सले तपाईंको हृदय ढाक्नेछ। आफ्नो तागत र आफ्नो भविष्यको योजना पुन: आकलन गर्ने समय। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।